फेसबुकले सन् २००९ मा लाइक फिचर ल्याएको थियो । फोटो, स्टाटस, लिंक आदिमा एक बटन क्लिक गरेर सजिलै अन्तरक्रिया गर्न सकिने भएपछि, फेसबुक लाइक पपुलर हुँदै गयो । सन् २०१० को तेस्रो फेसबुक एफएट सम्मेलन पछि 'लाइक' बटन यत्रतत्र देखिन थाल्यो, हरेक वेबसाइटमा लाइक बटन देखिन थाल्यो, पेजहरुमा भएका फ्यान पनि लाइकमा परिणत भए । यो तरिकाले हेर्दा फेसबुक लाइकले इन्टरनेट नै परिवर्तन गरिदियो, तर यही कुरा ट्विटरको फेवरेटको हकमा लागु भएन ।
ट्विटरको सुरुवात सँगै फेवरेटलाई 'बुकमार्क' भनेर मान्न थालियो, भन्नको मतलब ट्विटहरु बुकमार्क गर्नको लागि 'फेवरेट' फिचर थियो । फेवरेट फिचरलाई धेरैजसोले प्रयोग नै गरेनन्, प्रयोग गर्नेहरुले यसलाई बुकमार्क भनेर नै बुझे । जसरी हामी आफूले हेरिरहने साइटहरु, उपयोगी लिंकहरु ब्राउजरमा बुकमार्क गरेर राख्छौँ त्यसैगरि ट्विटरमा देखिएका महत्वपूर्ण ट्विट, तथ्यांक, लिंक आदि कुराहरु ट्विटरमा 'फेव' गर्ने चलन थियो ।
केही वर्ष अघिसम्म ट्विटर 'गिक'हरुले चलाउँछन् भनिन्थ्यो, जुन केही हदसम्म सत्य पनि थियो । सबैका लागि ट्विटर होइन नै भनेझैँ थियो । सन् २००९ - २०१० तिर साथीहरुलाई ट्विटर चलाउन आग्रह गर्दा पाइने जवाफ नै यही थियो, म ट्विटर बुझ्दिन, मलाई चलाउन आउँदैन, आदि इत्यादि । तर स्मार्टफोनको सहजता तथा फेसबुकमा भिडभाड बढ्दै गएपछि प्रयोगकर्ताहरु "वैकल्पिक" सोसल नेटवर्कको खोजीमा बिस्तारै ट्विटर तिर सर्न थाले ।
ट्विटर स्थापनाको १० वर्ष हुनैलाग्दा पनि ट्विटरले भनेजस्तो प्रयोगकर्ताहरु पाउन सकिरहेको थिएन । ट्विटर पहिलो पटक प्रयोग गर्नेहरुलाई 'फेव' फिचर एकदमै नौलो लाग्थ्यो । हुन पनि हो, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टम्लर आदि जहिँतहिँ 'लाइक' देखिरहेको, प्रयोग गरिरहेको बानी, ट्विटरमा फेव त नौलो हुने नै भो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ट्विटरले फेवरेटलाई सन् २०१५ मा लाइकमा परिवर्तन गरिदियो ।
ट्विटरले फेवरेटलाई लाइक बनाइदिए पनि, मेरा लागि अझै यो 'फेव बटन' नै हो । आफूलाई महत्वपूर्ण लागेका ट्विटहरु, ट्विटरमा देखिएका तर पढ्न नभ्याइएका लेखका लिंकहरु, मन परेका लेखहरुका साथै रिफ्रेन्स लिनुपर्ने कुराहरु नै विशेषत म लाइक गर्ने गर्छु । यसले चैँ गज्जबै लेखेछ, यो कुरा चाँही गज्जब मन पर्‍यो भनेर विरलै "लाइक" गर्ने गर्छु । गज्जब लाग्यो भने प्राय: रिप्लाइ वा रिट्विट नै गरिन्छ, लाइक'को सट्टामा ।
ट्विटर लाइकलाई निम्न तरिकाले अर्थ्याएर प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने लाग्छ।
बुकमार्क - आफूलाई महत्वपूर्ण लागेका ट्विट, घत परेका ट्विट/फोटो, लेखका लिंकहरु, रिफ्रेन्स लिनुपर्दा खोज्दा तत्काल भेटिनुपर्ने सामाग्रीहरुलाई लाइक गरेर बुकमार्क झैँ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जानकारी दिन - कसैले केही कुरा आफूलाई भनिरहेको छ, मैले सुनिरहेको छु वा कुराकानी टुङ्ग्याउन चाहन्छु भनेर जानकारी दिन पनि लाइक थिच्न सकिन्छ ।
ध्यान तान्न - कोही व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नु पर्ने छ, तर उक्त व्यक्तिले नोटिस गर्दैन भने उक्त व्यक्तिको ध्यान तान्न पनि केहीले निरन्तर उक्त व्यक्तिले लेखेका ट्विटहरु फेव गर्दै रहन्छन् र कुनै समयमा गएर कुराकानी सुरु गर्छन् ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतमा 'लाइक' गर्ने बानीका कारण ट्विटरमा पनि धेरैले लाइक थिचिरहेका हुन्छन्, जुन अमिल्दो देखिन्छ । फेसबुकमा तपाईले के के लाइक गर्नु भो भन्ने कुरा तेस्रो व्यक्तिले सजिलै थाहा पाउन सक्दैन तर ट्विटरमा तपाईले लाइक गरेको कुरा तपाईको प्रोफाइलमा गएर जुनसुकै बेला अरुले हेर्न सक्छन् । यो हिसाबले गर्दा पनि ट्विटरमा लाइक गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, फेरि पनि दोहोर्‍याँए, ट्विटरमा वा फेसबुकमा आउने लाइकहरु अनलाइन भोटिङमा मात्र काम लाग्छन्, यी लाइकहरुले कसैको समर्थन वा विरोध भनेर जनाउँदैन । कतिपय अवस्थामा आफूलाई मन नपरेको कुरा, आफूले समर्थन नगरेको कुरा, आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको कुरालाई पनि फलानाले यस्तो भन्यो है भन्ने हिसाबले बुकमार्क गर्नको लागि लाइक बटन थिच्ने गरिन्छ । आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको ट्विट वा मन नपरेको ट्विट प्राय रिट्विट गरिँदैन तर बुकमार्क गर्नकै लागि भनेर भएपनि, फलानाले यसो भन्यो है भनेर सम्झिनको लागि भएपनि, लाइक भने ठोकिन्छ, हैन र?
➤ ह्याचिङ ट्विटर - ट्विटरको इतिहास
➤ ट्विटर ह्यासट्यागको रामकहानी
➤ ट्विटर फलो फ्राइडे
➤ ट्विटरमा तपाईलाई 'फलो' नगर्ने ५ कारण
➤ सोसल मिडिया मिथ्याङ्क?
पहिलो तस्विर भर्जबाट साभार !